xoogaga Mukhtaar Roobow oo weerar culus ku qaaday kolonyo gadiid ay la socdeen Sarakiil ka tirsan Al shabaab - Hablaha Media Network
xoogaga Mukhtaar Roobow oo weerar culus ku qaaday kolonyo gadiid ay la socdeen Sarakiil ka tirsan Al shabaab
HMN:- Xoogaga Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), ayaa weerar culus ku qaaday kolonyo ay la socdeen mintidiinta Ururka Al Shabaab, xilli ay marayeen Gobolka Bakool.
Xoogaga Abuu Mansuur, ayaa weeraray kolonyadan oo marayay meel ku dhow Deegaanka Abal oo 18km u jirta Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Dagaalkan oo ahaa mid faraha looga gubtay, ayaa waxa uu soo gaaray Xalay ka dib markii la sheegay inay halkaasi ka gurteen maleeshiyada Shabaabka, iyagoo meydad wata.
Kolanyada gadiidka Al shabaab wateen ayaa waxa la socday Ninka Al shabaab u qaabislan Gobolka Bakool iyo Madaxa maxkamadaha gobolkaas, waxaan si rasmi ah loo ogeyn in khasaare uu kasoo gaaray weerarka
Wararka, ayaa sheegaya in dagaalkani uu soo gaaray Saqdii dhaxe xalay , waxaana uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isugu jira, inkastoo aan faah faahinta laga hayn inta uu gaarsiisan yahay.
Labada weerar ee Shalay galabta iyo Xalaay qaadeen xoogaga Abuu Mansuur, ayaa waxay ku soo beegmayan, xilli maalin ka hor uu Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid) uu iclaamiyay dagaal cusub oo ka dhan ah Al Qaacidada Somaliya.